Guam Tourism inodzorwa neUnited Airlines naKim Jong-un
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » North Korea Kuputsa Nhau » Guam Tourism inodzorwa neUnited Airlines naKim Jong-un
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Zimbabwe Breaking News • Hawaii Kupwanya Nhau • North Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Nezuro, ndakafamba nendege yeUnited Airlines kubva kuShanghai kuenda kuGuam. Ndege yainge isina chinhu, pamwe vafambi gumi nevashanu vari muchikepe.
Tichitarisa kuwanda mutero nemamepu echigaro pane dzimwe ndege kuenda kuGuam paUnited Airlines, zvinoita kunge ndege kubva kuJapan, China, uye kunyangwe kubva kuHonolulu dziri kubhururuka nevashoma vashoma vari mubhodhi.
Sekureva kwenhamba yakangoburitswa kubva kuUK kambani yekutsvaga, vanosvika kune dzimwe nyika munzvimbo yeUS vakadzika vangangoita 65% mushure mekutyisidzirwa kwechipiri kwakagamuchirwa neNorth Korea kutumira bhomba renyukireya kuGuam.
Kununura Guam ikozvino maKorea ivo pachavo - maSouth Koreans. Vanosvika vakagadzikana, mitoro yekubhururuka yakanakisa, uye iwe unowana vashanyi veKorea vachinakidzwa nemabhichi eGuam, zvitoro, uye maresitorendi.
Shamwari huru, asiwo vavengi vakuru, muvashanyi veGuam vanosvika iUnited Airlines.
United Airlines inobata wega nendege yakananga ku Honolulu, iyo gedhi kuenda kuUS mainland yekufamba kuenda kunharaunda.
United Airlines inoshandisa hub, yaimbozivikanwa seUnited Micronesia kushandira Japan, Korea, China, Philippines, Australia, uye zvimwe zviwi zvePacific kubva kuGuam.
Mumwe mufambi anotenga tikiti kuHonolulu kana kuLos Angeles achida kubhururuka kuenda kuShanghai, Japan, kana chero imwe nzvimbo, anofanirwa kubatana kuGuam uye haatenderwe kumira-kuGuam.
Kumira muGuam kazhinji kunowedzera nekatatu mutengo wetikiti.
Ndege dzinobva kuHonolulu kuenda kuGuam dzinodhura kupfuura nendege dzinobva kuHonolulu kuenda kuEurope, asi unogona kubhururuka kubva kuHonolulu uchienda kuShanghai semuenzaniso pamadhora mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nerwendo rwekutenderera uine shanduko kuGuam Tikiti kuenda kuGuam chete ingave ingangoita zviuru zviviri zvemadhora. Kumira muGuam kuongorora Guam kushanya kunowedzera tikiti rako kanokwana katatu.
Nendege dzisina chinhu, United ine nzira mbiri chete - gadzirisa faji dzemhepo kana nzira dzakatemwa. Guam yekushanya iri panyasha yesarudzo iyi.
Chidzidzo chakaitwa naForwardKeys chinoratidza kuti kuiswa kwezvirango zvitsva zveUN, zvichiteverwa nekumisikidzwa kwemashoko ehutsinye pakati paDonald Trump naKim Jong Un muna Nyamavhuvhu 9, kwakakonzera kuderera kwekushanya kuenda kuGuam. Ndipo panguva iyo Donald Trump akayambira kuti chero kutyisidzira kuUSA kuchasangana ne "moto nehasha" uye Pyongyang akapindura, achiti "iri kunyatsoongorora" chirongwa chekurova Guam, kumusha kunzvimbo yeuto reUS. Mumavhiki mashanu akatevera, vanosvika vanhu vanogara pakati pehusiku huna makumi maviri neumwe (husiku hwekushanya), vakadonha ne9%, nevakasvika kubva kuJapan, pachinyakare inonyanya kukosha misika yeGuam, ichidonha 30%.
Kudonha mukufamba kuenda kuGuam kwaizodai kwakanyanya, dai zvisiri zvekumuka kunoshamisa kwekushinga kwechitsuwa chePacific kubva kuSouth Korea. Asati asvika 9th Nyamavhuvhu, vanosvika kuGuam vaive vakakwira 11% asi izvo zvaikonzerwa nekuwedzera kwe41% mukufamba kubva kuSouth Korea, vachigadzika kuderera kwe13% mukushanya kubva kuJapan.
Mukugadzira zvinyorwa zvaro, ForwardKeys inoongorora zvinodarika mamirioni gumi nemanomwe ndege dzekubhururutsa nendege pazuva, kudhirowa data kubva kune ese makuru epasi rese ekuchengetedza mweya masisitimu uye ndege dzakasarudzwa nevashandisi vekushanya. Ruzivo urwu rwunosimudzirwa nemamwezve akazvimiririra madhata, kusanganisira kutsvaga kwendege uye huwandu hwehurumende huwandu pamwe nesainzi yedata kupenda mufananidzo wekuti ndiani arikuenda kupi uye riini, uye kufanotaura mafambiro emangwana.
Tichitarisa zvakadzama pazvirongwa zvevanhu zvekufamba kuenda kuGuam nekuongorora kushanya kwekufambisa kwakaitwa kusvika parinhasi (kwekugara kwenguva imwechete), zviri pachena kuti mushure maAugust 9, kubhuka kwese kwakadonha ne43%, kwakatarwa panguva yakafanana gore rapfuura uye kubhuka kubva Japan yakawa ne65%. Nokuenzanisa, kubhuka kubva kuSouth Korea kwakaderera ne16%.
Tichitarisa kumberi, nekuongorora mamiriro azvino mabhucha akagadzirwa ekufamba kuenda kuGuam kusvika kumagumo egore, izvozvi mamiriro ezvinhu ndezvekuti kwese kubhuka kuri 3% kumashure kwavakange vari panguva imwecheteyo gore rapfuura. Kubhuka kwanhasi kubva kuJapan kune 24% kumashure; kubva kuUSA, ivo vari 17% kumashure; kubva kuHong Kong, vari 15% kumashure uye kubva kuChina, ivo vari 51% kumashure. Nekudaro, pane yakanyanyisa kukurudzira chinyorwa, ikozvino kubhuka kubva kuSouth Korea kune 14% kumberi.
Iko kukura kwakasimba mukubhuka kunogona kuve kunzi kunokonzerwa nekuwedzera kwemweya kugona pakati peGuam neSouth Korea. Kubva munaGunyana 13, 2017, Air Seoul yakava mutakuri wechitanhatu kubva kuKorea kupa zvakanangana neGuam. Iyo yekutanga purogiramu ndeye kashanu kushandurwa kwevhiki asi Mhepo Seoul ichawedzera izvi kumabasa ezuva nezuva muna Gumiguru.
Mario Hardy, CEO, Pacific Asia Travel Association, akataura kuti: “Tiri kurarama munyika yekusagadzikana, kusagadzikana uye kusagadzikana kwezvematongerwo enyika izvo zviri kunetsa nzvimbo zhinji dziri kutenderera pasirese. Chitsuwa cheGuam chave kutanga kunzwa simba remashoko ehondo pakati pevatungamiriri venyika mbiri uye anotiyeuchidza nezve kusasimba kweindasitiri yekushanya neyekushanya. ”
Olivier Jager, CEO, ForwardKeys, akapedzisa: zvakakonzera kuti vanhu vangobhuka gare gare (kureva, padyo nezuva rekufamba) pane kusauya. Mumwe haakwanise kushamisika kuti kukakavara kuri kuwedzera pakati peNorth Korea neUSA kwakadzora vashanyi kuGuam. Chii chinonakidza ihwo hunoshamisa hunoshamisa iyo musika weSouth Korea iri iyo 'chena knight', ichikwenenzvera maitiro. "Ini ndinogona kungofungidzira kuti maSouth Koreans vakafadzwa nekutaura kweGuam kwekusimudzira kuti ndiyo nzvimbo chaiyo yekudanana - uye nekuenda ikoko, vari kuratidza kuti vari kufarira kuita rudo kupfuura hondo!"